सम्पादकीय Archives - Page 21 of 35 - Online majdoor
सरकारको घट्दो तेज
दुईतिहाइ बहुमत बोकेर सत्तारोहण गरेको ओली सरकार एकपछि अर्को धरापमा पर्दै गएको छ । जुन उत्साह र उन्मादका साथ सरकार गठन भएको थियो, त्यसमा क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । चुनावी घोषणापत्रका कुरा त परै छाडौं, सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट व्यक्त प्रतिबद्धतासमेत पूरा हुन सकेका छैनन् । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउने गृहमन्त्रीको घोषणाले जुन आशा जगाएको थियो, […]
अस्पताल आफैं रोगको घर !
अस्पताल अस्वस्थ मानिसलाई स्वस्थ बनाउने ठाउँ हो । तर अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूको वातावरण बिरामी नभएका स्वस्थ मानिसलाई समेत अस्वस्थ बनाउने खालको छ । बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँको वातावरण अझ बढी सफा र स्वच्छ हुनुपर्ने हो । वातावरण फोहोर र अस्वस्थकर बन्दा अस्वस्थ मानिस त प्रभावित हुन्छन् नै, स्वस्थ मानिस पनि बिरामी पर्ने सम्भावना रहन्छ । […]
सरकारी कार्यालयका अपव्यय
सिंहदरबार र विभिन्न प्रमुख सरकारी कार्यालयका प्राङ्गणमा थन्काइएका सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले राज्यकोषको अपव्ययतिर मात्र सङ्केत गरेको छैन, बरू सरकारी कर्मचारीहरूबीच झाङ्गिएको सुविधाभोगी प्रवृत्ति पनि सतहमा ल्याएको छ । नेपाल संसारकै सबभन्दा गरीब देशमध्ये पर्दछ । अझै पनि बहुमत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । आफ्नै देशमा रोजगारको बन्दोबस्त नहुँदा दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा नेपाली […]
साँस्कृतिक चाड छठ आज भव्यताका साथ मनाइँदै छ । नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रका चाडबाडका आ–आफ्ना सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व छन् । सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउन यस्ता चाडबाडले विशेष भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । धर्मप्रतिको विश्वास र आस्था व्यक्तिको निजी मामिला हो । चाडबाडसँग जोडिएको किंवदन्तीको वैज्ञानिकता पनि समयको कस्सीमा जाँचिने गर्दछ । तर चाडबाडले समाजमा गाडेको सांस्कृतिक महत्व भने […]
पुस्तक बजारमा एकपछि अर्का आत्मवृत्तान्तका पुस्तकहरू आइरहेका छन् । महिना दिन बिराएर विभिन्न क्षेत्रमा परिचय बनाएका व्यक्तिहरूका आत्मवृत्तान्त प्रकाशनको लहर चलिरहेको छ । यो लहरले नेपाली सहरिया समाजमा उँभोलाग्दो पुस्तक अध्ययन संस्कृतितर्फ सङ्गेत गरेको छ । मानिसहरू पुस्तक पढ्न र पुस्तकप्रति चासो राख्न थालेका छन् भन्ने कुरा यो लहरले देखाएको छ । विकास र सभ्यताको इतिहासमा पुस्तकको भूमिकालाई कसैले […]
मिगुएलको एसिया भ्रमण
रूस र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको औपचारिक भ्रमणपश्चात क्युवाली राष्ट्रपति मिगुएल डायज कानल जनवादी गणतन्त्र चीन पुग्नुभएको छ । समाजवादी देश क्युवाको राष्ट्रपति बनेयता मिगुएलको यो पहिलो एसिया भ्रमण हो । चीनबाट उहाँ भियतनाम, कम्बोडिया र लाओस जानुहुने कार्यक्रम छ । संरा अमेरिकाको नाकैमुनि रहेर बितेका ६ दसकदेखि समाजवादी झण्डालाई उँचो राख्न लगातार सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दै आएको क्युवाका राष्ट्रपतिले […]
नेपाल संवत् ११३८ लाई बिदा गरेर आजबाट नयाँ वर्ष नेपाल संवत् ११३९ सुरू भएको छ । नेपाल संवत्को इतिहासमा नसुल्झिएका धेरै विषय अद्यापि छन् । भविष्यले त्यस्ता नसुल्झिएका इतिहास पनि क्रमशः सुल्झाउँदै जानेछ । तर नेपाल संवत्को नयाँ वर्षारम्भ नेपाली जनताले उत्सवको रुपमा मनाउने सांस्कृतिक उत्सवमध्ये बनिसकेको छ । केही मानिसहरू नेपाल संवत्लाई केही जाति विशेषको संस्कृतिको रुपमा सङ्कुचित […]
प्रदेशसभा गफ गर्ने थलो होइन ! मुख्यमन्त्रीहरू बुँख्याचा होइनन् !!
प्रधानमन्त्री ओली र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूका अधिकारको लेनदेनको लुकामारी सजिलैसित टुङ्गिने सपना कसैले नदेखे हुन्छ । विषय सङ्घ राज्यको आवश्यकता ‘स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता दिन’ नचाहने दलहरू नै राज्यसत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् । तिनीहरूले विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूको मर्म तथा उद्देश्यलाई एउटै डालामा राखेर समाधान गर्न खोजेको हुँदा समस्या जटिल देखिएका हुन् । त्यसो होइन भने […]